China FRP Bonai rhanga- Fibreglass Sheet Factory GRP Ufuna mveliso kunye nabenzi | IBonai
Iphepha le-fiberglass eluphahleni (i-fiberglass yethayile yeplastikhi okanye i-FRP skylight)) yinto entle edityanisiweyo equkethe i-fiberglass yokuqinisela kwimatrix ye-polyester resin engafakwanga kunye ne-U / V ezinzise ukhuseleko lwangaphandle ngombala wokukhetha kwakho onamandla ahlukileyo ubunzima bomlinganiselo.
Ngenxa yezi zinto zibalaseleyo ngokungafaniyo ne-PVC okanye ukhuni, ifumana usetyenziso lwayo ngokubanzi kuwo onke amabakala obomi: i-aerospace, oololiwe, ishishini leekhemikhali, ishishini lolwandle, ishishini lokutya, ishishini leemoto, ulwakhiwo nolwakhiwo, njl.
Ukuhanjiswa okuphezulu ukuya kuthi ga kwi-85% kunye nokukhanya kwemini okuthambileyo
Ukuzinza: Amashiti e-FRP anobomi obude kakhulu benkonzo njengoko bomelele kwaye bhetyebhetye
Ubunzima bokukhanya kunye nefuthe eliphezulu: uxinano oluphakathi kwe-1.5 ~ 2.0, kuphela i-1/4 ~ 1/5 yentsimbi yekhabhoni, kodwa amandla aqine asondele okanye angaphezulu kwaleyo esinyithi esiphakathi. ikhabhoni.
Ukuxhatshazwa kwe-Corrosion ephezulu kakhulu-i-FRP nayo ikulungele ukusetyenziswa kwiindawo ezinobungozi kakhulu apho ukubonakaliswa kweekhemikhali okanye amanzi anetyuwa kuyinkxalabo, i-UV inokumelana nokukhanya kwelanga kwaye ingaveliswa kunye nabagcini bomlilo xa kufuneka.
Ukugquma kweThermal eQhelekileyo: Ukuqhutywa kwe-thermal ye-FRP yi-1.25 ~ 1.67 kJ / (m · h · K) kubushushu begumbi, kuphela yi-1/100 ~ 1/1000 yesinyithi. Ke ngoko, sisixhobo esifanelekileyo sokukhusela i-thermal kwaye siyamelana nokuthotywa kwamaxesha okwedlula kweqondo lobushushu eliphezulu.
Ukuguquguquka kubungakanani kunye nobukhulu: Amashiti e-FRP ngawenziwe ngamashiti kwaye anokuveliswa ngobukhulu obahlukeneyo, ubukhulu kunye noyilo.
Kulula ukuyifaka, ukuyigcina icocekile.
Umbala weSiko kunye noYilo: Amashiti e-FRP anokwenziwa nakweyiphi na imibala kunye noyilo olwahlukeneyo.
1Phendula imibuzo yakho kwi-Intanethi iiyure ezingama-24 ngexesha elifutshane kangangoko kunokwenzeka
2Abasebenzi abanamava ukuphendula yonke imibuzo yakho
4 Siza kukwazisa ngemilinganiselo ethile kunye nemibala oyifunayo.
5 Sinokuvelisa iibhodi zepolycarbonate, kwaye sikulungele ukukunika ezinye iingcebiso ngolwazi lwakho.
Q: Ndingalufumana njani isampuli?
A: Ngokumalunga neesampulu zasimahla, kufuneka uhlawule ukuhanjiswa kwazo.
Q: Yeyiphi imiqathango yentlawulo ongayamkela?
A: Singalwamkela ugqithiselo ngocingo, iileta zekhredithi, kunye neNtshona Union.
Egqithileyo I-FRP GRP yeFiberglass yeDreyina yokuhambisa amanzi
Okulandelayo: Umphezulu oGudileyo oGqityiweyo we-FRP yeplastiki yePlati